အကယ်ဒမီ ဆုပေးရေး အဖွဲ့သစ်မှာ လူငယ် တွေနေရာပိုပေးမယ်လို့ ဦးဇင်ဝိုင်း ကပြော
အကယ်ဒမီ ဆုပေးရေး အဖွဲ့သစ်မှာ လူငယ် တွေနေရာပိုပေးမယ...
28 มี.ค. 2562 - 00:31 น.
အခုနှစ် မှာ လူငယ်တွေ ပါဝင်လာနိုင်အောင် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ ဇာတ်ကားတွေများပြီး အချီန်ကြာ တာကြောင့် လူငယ်တွေ မပါနိုင်တာဖြစ် တယ် လို.လည်း
အကယ်ဒမီ ဆုပေးရေး အဖွဲ့သစ်မှာ လူငယ်တွေနေရာပိုပြီး ပါဝင်လာနိုင်အောင် ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဦးဇင်ဝိုင်းကပြောပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးကို ၂၀၁၂ခုနှစ်က ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအောက်ခြေအဆင့်ကနေ ဆုရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ သူကပြောပါတယ်။ အခုနှစ် မှာ လူငယ်တွေ ပါဝင်လာနိုင်အောင် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ ဇာတ်ကားတွေများပြီး အချီန်ကြာတာကြောင့် လူငယ်တွေ မပါနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးဇင်ဝိုင်းက ပြောပါတယ်။
အကယ်ဒမီစာရင်း အွန်လိုင်းမှာ ပေါက်ကြားခဲ့တာအပေါ် အဂတိလိုက်စားမူ တွေရှိနိုင်တယ်လို့ ဝေဖန်ကြပါတယ်
မြန်မာနိုင် ငံရုပ်ရှင်အစည်း ရုံး ဥက္ကဌ ဦးဇင်ဝိုင်းကတော့ "ဒီမိုကရေစီသဘောအရ မဲအများဆုံးလူက ဆုရသွားတာဖြစ်ပြီး ဒီအပေါ်မှာ အဂတိတရားရှိသလား ဆိုတာကတော့ ပြန်သုံးသပ် ရဦးမှာပါ "လို့ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ် ။
တစ်သက်တာရုပ်ရုင်ထူးချွန်ဆု ကို ဒေါ်မြင့်မြင်ခင် ကို ချီးမြုင့်ခဲ့ပါတယ်
အခုနှစ် မှာ လူငယ်တွေ ပါဝင်လာနိုင်အောင် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ ဇာတ်ကားတွေများပြီး အချီန်ကြာတာကြောင့် လူငယ်တွေ မပါနိုင်တာကိုလည်းသူက ဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်၊
"ဆုရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့မှာ အဲဒီ့ နိုင်ငံတကာဆုရကားတွေကို ဆုပေးတဲ့သူရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က လူ၄၅ ယောက်ပေးတဲ့ အမှတ်စာရင်းအတိုင်း ပေးတာပါ" လို့လည်း ဦးဇင်ဝိုင်းက ပြောပါတယ်။
အကယ်ဒမီ စည်းကမ်းတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့လည်း ကြိုးစားမှာပါ။ အဲဒီအစည်းဝေးကျရင် အကယ်ဒမီဆုပေးရေးအဖွဲ့သစ်မှာ လူငယ်တွေနေရာပိုပေးဖို့ တင်ပေးမယ်လို့ ဥက္ကဌ ဦးဇင်ဝိုင်းက ပြောပါတယ်။
"လူငယ်ဆိုတာ ကတော့ ၂၅ နဲ့ ၃၅ ကြားပေါ့၊ သူတို့ ပါဝင်နိုင်အောင် သူတို့သဘောထားတွေ ပါဝင်နိုင်အောင် ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်လို့ ဆုပေးရေး အဖွဲ့သစ်မှာ လူငယ် တွေနေရာပိုပေးဖို့ တင်ပြပါမယ် "လို့ ဥက္ကဌ ဦးဇင်ဝိုင်း က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အကယ်ဒမီ ဆုပေးရေး အဖွဲ့သစ်မှာ လူငယ် တွေနေရာပိုပေးမယ်လို့ ဦးဇင်ဝိုင်း ကပြော